Ụlọ Ọrụ Nrụpụta Ọrụ nke Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ Ụlọ Ọrụ China Manufacturer
Nkọwa:Ọnụ Ụzọ Ntugharị Rolling,Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ Na-arụ Ọrụ Ụlọ Ọrụ,Ndozi Onwe Onye na-arụ ọrụ nkwụsị
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > Ọnụ ụzọ nkwụnyeghachi onwe onye > Ụlọ Ọrụ Nrụpụta Ọrụ nke Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ Ụlọ Ọrụ
Ihe Nlereanya.: SE-02
Ekegharị moto ma ọ bụ SERVO moto. Ike ọrụ 220V / 50Hz ma ọ bụ 380V / 50Hz. Ike 0.55-1.5KW; F: IP55. Okpomọkụ na-arụ ọrụ: -30-60 degrees Celsius.
2. Ogwe ntụziaka
Ogige ndị ọrụ SERVO nke Italy. Na iji ezi ígwè ịchịkwa moto na-agba ọsọ karịa akara ederede odide. E gosipụtara Ngosiputa Ngwaọrụ Ndị Mmadụ, iji rụọ ọrụ kwa ụbọchị ma mee ka ọ dị mfe karị. Enwere usoro nlele onwe onye na-emehie ma gosipụta koodu njehie mgbe enwere nsogbu.
3. Nwee oke ikuku
Nhazi ihe nkedo nke ezipụ, na-ejikọta ákwà na ndu ndu dị ka ahụ dum, na-ekpochapụ ọdịiche n'etiti ha. O doro anya na ọ na-eme ka arụ ọrụ akara aka na ikuku ikuku.
4. Nwepụta onwe onye
A na-agbanye mmiri na-agbanye ọkụ ọkụ dị ka nkwụsi ike nke ala, kama ịmepụta ihe omimi nke aluminom na-emepe ọnụ ụzọ ngwa ngwa. Mgbe enwere mberede nkwekorita ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, ụzọ ahụ agaghị emebi. Ọ nwere ike weghachite na akpaghị aka ma ọ bụ ọkara na-akpaghị aka n'okpuru enyemaka aka. Nzube a na-ebelata mmezi na ịrụzi ọrụ nke ijikọta.
5. Nhazi ígwè
Ọ na-agụnye ụzọ abụọ nduzi, otu mkpuchi n'elu na otu mkpuchi moto.
Ihe eji eme ihe: Agbara galvanized, a na-ese n'elu ala; Nhọrọ ihe onwunwe: 304 igwe anaghị agba nchara
Oke: 2.0mm maka rails nduzi, 1.5mm maka mkpuchi elu na mkpuchi mkpuchi moto.
6. PVC akwa:
Ihe: PVC Fabric; Ọdịdị dị: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm na 1.5mm; Agba dị: Blue / Yellow / Red / Gray / White / Full Clear. Ọnụahịa nke Full zuru oke dị elu karịa ndị ọzọ site 5%. Ụdị agba ọ bụla nwere otu ọnụahịa.
7. Ọrụ nchedo
A. Igwe foto nchekwa.
B. Idi nso ihe mmetụta, na ala.
C. Mkpu mkpuchi maka ịkpachara anya.
8. Usoro ọrụ arụmọrụ
Pịa bọtịnụ nke abụọ.
9. Usoro ime nhọrọ
Ntughari akuku n'akụkụ / njikwa ntaneti (ogwe njikwa abụọ) / Onye na-achọpụta ụgbọala n'akụkụ otu akụkụ / Otu akụkụ iwepụ mgbaaka /; Imechi
A na-eme PVC a kwusiri ike, na-eme ka ala ala dị ala dị arọ.
Azụ nke ákwà mgbochi ahụ na-ebugharị ezé na-aga n'ihu na mgbe ahụ na-agagharị ma gbadaa n'ime onwe-lubricating
uzo polyethylene nke ejiri aka n'osisi nke galvanized.
Ọkpụkpụ Ngwa ngwa akwa na-acha uhie uhie Zipper Kpọtụrụ ugbu a
SGS Asambodo Zipper High Speed ​​Door Kpọtụrụ ugbu a
Fabriclọ ọrụ mmebe akwa Zipper elu Speed ​​Door Kpọtụrụ ugbu a
Ọkpụkpụ Elu arụmọrụ nke elu arụmọrụ dị elu Kpọtụrụ ugbu a
Akpụkpọ anụ na-ahụ maka onwe gị Kpọtụrụ ugbu a
Actorylọ ọrụ njikwa onwe gị dị elu nke na-ebu ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Onwe Gaputa Onweghi Nsogbu Nkewara ososo Kpọtụrụ ugbu a
Autolọ Egwuregwu Auto Zipper High Speed ​​Door Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ Ụzọ Ntugharị Rolling Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ Na-arụ Ọrụ Ụlọ Ọrụ Ndozi Onwe Onye na-arụ ọrụ nkwụsị Ọnụ Ụzọ Ntugharị Roller Ọnụ Ụzọ Ntugharị Rolling Shutter Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ọnụ Ụzọ Ntugharị Roller Shutter Ọnụ Ụzọ Ntugharị Mgbanaka